Rita, Writing for My Sake!: Poem & Me !
Posted by Rita at 1/16/2010 06:45:00 PM
ကျွန်တော်လဲ ကဗျာကို မခံစား တတ်လောက် အောင် ညံ့ခဲ့ တာဗျ။ မရီတာ ပြောလိုက်မှ ပိုသိလာတယ်။
ကိုယ်လည်း ကဗျာကို ငယ်ငယ်က သိပ်မခံစားတတ်ခဲ့ပေမယ့် ဆရာမောင်စိန်ဝင်းနဲ့ ဆရာငြိမ်းကျော်တို့ရဲ့ ကဗျာလေးတွေတော့ ကြိုက်တယ်။
ဥပမာ - အချစ်ဆိုတာ...၊ ခပ်စိမ်းစိမ်းနေပါ့မယ်လို ကဗျာမျိုး၊ ခုထိအလွတ်ရပြီး စွဲနေတယ်။ “ဒဏ္ဍာရီ” ကတော့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာသွားကြည့်ကတည်းက တစ်ခါတည်းနဲ့ အလွတ်ရပြီး စွဲသွားတဲ့ကဗျာ။ (ကိုယ်ရှစ်တန်းလောက်က ဖြစ်မယ်ထင်တယ်)
ခုတော့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖတ်ရင် အရင်ကထက် အများကြီးပိုပြီး သေချာဖတ်တတ် ခံစားတတ်လာပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆပါတယ်း)
မှတ်မှတ်ရရကဗျာစာသားက "ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရယ်၊ ကုန်ထုတ်တဲ့ လက်တစ်စုံရယ်ရှိရင် ကိုယ်တို့လက်ထပ်ကြပါစို့ .." တဲ့
နောက် တဂိုးကဗျာလေး ..ဘာသာပြန် သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး သူက စကားပွင့်လေးဖြစ်ပီး သူ့အမေကို ပုန်းနေတာ အမေက တကြော်ကြော်အော်မှ သနားပီး ပြန်ကိုယ်ထင်ပြတဲ့အကြောင်း ..
ကြိုက်မိတာတွေကတော့ အများကြီး ... ကိုယ်နဲ့ ဝေးနေတာတွေလည်း အများကြီး ...